Fampisehoana : Omena fiofanana ireo mpikirakira feo sy jiro -
AccueilVaovao SamihafaFampisehoana : Omena fiofanana ireo mpikirakira feo sy jiro
Fampisehoana : Omena fiofanana ireo mpikirakira feo sy jiro
Mahazo vahana eto amintsika amin’izao fotoana ny fampisehoana. Miroborobo noho izany ireo oriansa eo amin’ny sehatry ny fampanofana fanamafisam-peo sy jiro. Tsikaritra anefa fa betsaka ireo teknisianina eto amintsika no tsy mahafehy araka ny tokony ho izy ireo fitaovana ireo. Indrindra rahateo fa tsy mitsahatra mivoatra manaraka ny teknolojia ny fitaovana ampiasaina. Noho ny fahatsapana izany dia omena fiofanana ireo teknisianina mpikirakira ny feo sy ny jiro, izay anisan’ny asa goavana manodidina ny kolontsaina. Ny 27 ka hatramin’ny 31 aogositra izao no hanatanterahana izany etsy amin’ny Ivon-toerana Institut Français de Madagascar na ny IFM Analakely. Ny ivon-toerana ho an’ny zava-kanto ankehitriny eto Madagasikara na ny CRAAM no mikarakara izany fiofanana izany ao anatin’ilay hetsika « M’kolosaina 2.0 ». Ity farany izay manana tanjona ny hahamatihanina ny tontolo manodidina ny kolontsaina.
Misokatra ho an’ireo liana amin’izany fikirakirana ny feo sy ny jiro amin’ny fampisehoana izany ity fiofanana ity. Efa misokatra ary hifarana ny 25 jolay ho avy izao ny fisoratana anarana. Ireo efa matihanina maromaro amin’ireo lafiny ireo no hizara ny traikefany amin’io fiofanana haharitra dimy andro io.